Luis Suarez oo si dadban u weeraray macallinkiisa Quique Setien kaddib bareejadii xalay Barcelona la gashay Celta Vigo – Gool FM
Luis Suarez oo si dadban u weeraray macallinkiisa Quique Setien kaddib bareejadii xalay Barcelona la gashay Celta Vigo
(Barcelona) 28 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa mar kale dhibco lumisay kulan ay La Liga ku soo ciyaaraan meel ka baxsan garoonkooda, waxaana barbarro xalay la galeen kooxda Celta Vigo.
Kulankii xalay ee ku soo idlaaday 2-2 ayaa ka dhigan inay sare u sii kaceyso dhibaatada Blaugrana ka heysato ciyaaraha ay bannaanka ku soo dheelaan.
Barca ayaa qarka u saaran inay lumiso hoggaanka horyaalka La Liga, waxaana ay labo dhibcood ka dambeyn doontaa Real Madrid haddii ay caawa guul kala soo hoyato kooxda Espanyol ee ka dhisan magaalada Barcelona.
Weeraryahanka Barcelona ee Luis Suarez ayaa saxaafadda la hadlay markii ay soo idaalatay ciyaartii ay kooxdiisa ka adkaan weysay naadiga ku jirta booska 16-aad ee kala sarraynta La Liga.
“Marka aan bannaanka ku soo ciyaareyno, waxaan lumineynaa dhibco muhiim ah, mana ahan wax aan caadiyan sameyn jirnay xilli ciyaareedyadii hore” ayuu yiri Suarez kaddib dhammaadkii ciyaarta.
“Waxay ila tahay inay tahay sababta ay tababarayaasha u joogaan inay xalliyaan dhibaatooyinkan oo kale. Annaga dadaalkeenna ugu fiican aan ku soo bandhignaa groonka” ayuu hadalkiisa ku soo daray laacibka reer Uruguay.
33-jirkaan ayaa difaacay bandhigga kooxdiisa inuu wanaagsan yahay, balse macallinka laga rabo inuu xalliyo dhibaatooyinka guul la’aanta ah.
hadalkan ayaa ku foorarsan doona tababaraha Barcelona ee Quique Setien, kaasoo horraantii sanadkan xilka kala wareegay macallinkii la eryay ee Ernesto Valverde.
Chelsea oo kalsooni buuxda ku qabta saxiixa Declan Rice iyo Tababare Frank Lampard oo boos cusub u adeegsan doona
Pep Guardiola oo shaki galiyay mustaqbalkiisa Manchester City xilli qandaraaskiisa Etihad uu dhici doono sanad kaddib